Zumba | မိုးချိုသင်း မှတ်တမ်း
go go ... twar par ...
ဟားဟားရယ်လိုက်ရတာအမရယ် ။ မမချိုသင်း ကနေပုံကို ၊ ဘေးကလာရပ်ကြည့်နေသလိုကိုမြင်ယောင်မိပ။ :-P
အကသင်တန်းတွေက စတက်စမှာအဲလိုကြီးပဲမရဲ့ ။
ရှက်နေတာနဲ့ပဲစိတ်ကိုလွှတ်လိုက်ဖို.ခက်နေတာ။ တပတ်တရက်ထဲကတော့နဲတာပေါ.။ :P
ဆက်တိုက်တပတ်လောက်သွားကပစ်လိုက်ရင် ok သွားမှာပါ ။
နောက်တပတ်လဲသွားပါအုံးနော် ။ အားပေးခဲ့ပြီ ။ :-) အမြဲကျန်းမာနေအောင်လို. ။
တပတ်မှ တရက်တည်းမဟုတ်လား အမ
နောက်လုပ်ရင်းနဲ့ အသားကျသွားမှာပါ :)
ဖတ်ရင်းနဲ့ ရယ်လိုက်ရတာ။ ကြိုးတွေ လုံးသလိုမျိုး ကကွက်ကိုတောင် မြင်ယောင်လာတယ်။ က ပြီး အမောပြေ စားဘို့ ပဲပလတာ လာပို့တယ်နော်။
Go ahead. You can dance very well afteracouple week. Dancing is the best exercise.
Again, go again in next week plz.
မချိုသင်းရဲ့ Zumba အက ကတော့ မျက်စိထဲ ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းပဲ..
အရေးကလည်းကောင်း။ မျက်စိထဲ အစ်မမိုးချိုသင်းကနေတဲ့ ပုံကို မြင်ယောင်ပြီး ရီချင်တယ်။
ဒါပေမဲ့ အတော်ကောင်းတဲ့ အိုင်ဒီယာပါ။ ကျွန်တော်လည်း ၀တ်လျှော့ဖို့ ကြိုးစားနေတာနဲ့ အတော်ပဲဖြစ်သွားတယ်။ ရပ်ကွက်ထဲက နတ်ပွဲတကာလှည့်ပြီး လိုက်ကဦးမယ်။
မဖြစ်သေးပါဘူး။ တော်ကြာ ကိုကြီးကျော်နဲ့ချည်း တွေ့နေဦးမယ်။
မရပ်ပါနဲ့ သွားပါ အန်တီချိုရဲ့... ကျန်းမာရေးက အရေးကြီးတယ်။ (ဒါမှ နောက်လည်း အန်တီချို က, တာတွေ ဖတ်ရမှာ ...ဟီဟိ့)
ဟား ဟား အမချိုသင်းရယ် ရယ်လိုက်ရတာ။ အကဆရာမက အမကို လန့်သွားပုံရတယ်နော်။ ပျော်စရာကြီးရယ် နောက်တပတ်လည်း သွားသာသွားပါ။ အိမ်ရှိလူကုန် ကျောင်းလိုက်ပို့တာလည်း ခံရတယ်။ အလိုလိုက်ခံရ နည်းတာမှတ်လို့။ ကျန်းမာရေးလည်း ကောင်းတာပေါ့ အမရဲ့။ သွားသာသွားအမ။ အဟီး ကိုယ့်လွှတ်ရင်တော့ လွှတ်တဲ့သူ ရန်သူမှတ်မှာ အမချိုသင်းကိုသာ သွားဖို့မြှောက်ပေးခဲ့တာ။
အမ Zumba အကဆိုတာ သေသေချာချာ မသိလို့ you tube မှာကြည့်ပြီးမှ လာ comment တာ။ ဟုတ်တယ်နော်.. ရေကူးသလို လုပ်လိုက်.. လက် နှစ်ဘက် အပေါ်မြောက်ရမ်းသလို လုပ်လိုက်နဲ့ .. အတော့်ကို အကြောအချင် ပြေမှာပဲဗျာ။ ဒါပေမယ့် နောက်က သင်တန်းသူတွေ ကတာကြည့်ပြီး တော်တော်ရီနေရတယ်။ အမချိုသင်း ကတာများသာ ကြည့်လို့ ရရင်တော့ အူလိမ့်နေမှာ အမှန်ပဲ။ :D
ကျန်းမာဖို့အပတ်စဉ် ၁ နာရီ လေ့ကျင့်ပါစို့ ။။ (အမအတွက်နော် ကျွန်တော်ကတော့ အိပ်တယ်ဟီးး)
ချိုသင်းက ရှိတ်ဆွဲနေပြီ။ နောက်ဆို ဘလော့မှာတွေ့ ရတော့မှာ မဟုတ်ဘူး။ ဒစ္စကို သွားနေလို့ဟင်းဟင်းဟင်း ပါတီသွားနေလို့ ဟင်းဟင်းဟင်း
၀တ်စုံသွားဝယ်နေလို့ ချိုသင်းအကျီ င်္တွေ မတန်တော့လို့ နေမှာ။
ကိုကိုချိုသင်းက ဂိုးဂိုးဂိုးနဲ့ ဘော့လုံးပွဲကြည့်
မမချိုသင်းက ဘော့လုံးလေးလို လိမ့်နေအောင်က ကြည့်ချင်လိုက်တာနော်။
ပွတ်သဘင်တွေ ဘဲလေးကတွေ ရက်ပတွေ အာဖရိကန် ဒန့် စတွေ အာခရိုဘက်တွေ ဆက်ရန်ရှိသေးသည်။မျှော်
ဆက်သွားပါ အစ်မရဲ့ ။ ပျော်ဖို့ကောင်းတယ်နော် ။ ကြိုးတွေ လုံးသလို ကတာကိုမြင်ယောင်ပြီး ရယ်မိတယ် ။ ဟား ဟား ။
အစ်မရေ..youtube မှာ ရှာကြည့်ပြီးသွားပြီ ။ သူတို့ကတာကိုကြည့်တာပဲ ။ ဒါပေမယ့် အစ်မကတာကိုပါ မြင်ယောင်ကြည့်ပြီး ရယ်လိုက်ရတာ ဖတ်ဖတ်မော ... ဗိုက်တွေတောင်နာတယ် ။ ဟောဟဲ..ဟောဟဲ...
ဟားဟားးးးးးးးးးမမကနေပုံ ကိုမြင်ယောင်ပြီး ရီလိုက်ရတာ။
ဟီးဟီး။ ဝိတ်ချတာ ကောင်းပါတယ် အမရဲ့။ ဟစ်ဟော့ပ်ပါ သင်ပြီး ဒစ္စကို သွားပေါ့။ ပျော်ဖို့ ကောင်းပါတယ်။
ပင်ပန်းပြီး ပိုမစားနိုင်ဘူးလားဗျ :)
VOA Interview မှာကြားခဲ့တုန်းထဲက မမ လှမ်းသတိပေးချင်နေတာ
အသံလေးက ခပ်အက်အက်လေး ဖြစ်နေလို့..
ဘယ်လိုပြောရမယ် မှန်းမသိလို့ ပါ..
ကျန်းမာရေး ဂရုစိုက်ပါ ညီမရေ
မမ တွေ့ချင်ဆုံး လူသားထဲ မှာ ညီမ ပါနေတယ်
တို့တွေ ဆုံ ကြမယ်လေ...
လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ပြီးလျှင်၊အဆာပြေ Donut လာစားပါ။
အပြင်က ဗိုက်ဆာပြီး ပြန်လာတာ မမချိုသင်း အသစ်တက်လို့ အရင်ဖတ်နေတာ...။ အင်နဲ့ အားနဲ့ အော်ရယ်မိလို့ ဗိုက်တောင် ပိုချောင်သွားပြီ... ဒါတောင် မစားသေးပဲ ကောမန့်အရင်ရေးပြီး ကဲရီးအွန်ဖို့ အားပေးနေတာနော်....။
Hi ma..ma :)
ရာဝင်အိုးကြီး ခြေလှုပ် လက်လှုပ် ကနေတာ မြင်ယောင် မိပါပေရဲ့ ..း)
သွားပါ အန်တီချိုရဲ့... ပထမကြိမ်ဆိုတော့ဒီလိုဖြစ်မှာပေါ့ .... မစဉ်းစားနဲ့...သွားနော် ...နောက်တော့အားလုံးအဆင်ပြေသွားမှာပါ...အဲ့ကျတော့ကရတာပျော်လာလိမ့်မယ် ... ကျန်းမာရေးကိုလည်းဂရုစိုက်နော်....ဂရုစိုက်မယ့်သူတွေရှိတာကောင်းတာပေါ့အန်တီချိုရယ်....avocado တို့ဖြင့်ပြီးခဲ့တဲ့ရက်နေမကောင်းဖြစ်တာတောင်တစ်ယောက်ထဲ... အမေကိုပိုလွမ်းလို့ဖုန်းဆက်ရင်းငိုရသေးတယ်... ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျန်းမာရေးဂရုစိုက်နော် ..နောက်အပတ်အကသင်တန်းလည်းသွားနော်
မမ နောက်တပတ်ကျရင် ဗွီဒီယိုပါရိုက်လာပြီး တင်ပါလား။ Blog Hit တွေ နင်းကန် မတက်ရင် ပြောချင်တိုင်းပြော...
မချိုသင်းရေ ကျမလည်း တစ်လောက ကံစမ်းမဲပေါက်
တယ်။ Fitness Studio တခုမှာ ၂လလုပ်ခွင့် ရတယ်။ အစပိုင်းတော့ မချိုသင်းလိုပဲ မောနေတာပေါ။
တဖြေးဖြေးနဲ့ အခုတော့အရှိန်ရလာပြီး ပျော်လာတယ်။
အားတင်းထား။။။။။။။ ညနေကြရင်တောင် သွားလိုက်အုံး
မယ်။ မချိုသင်းကို သတိရ နေမယ်။
စိတ်ကူးနဲ့ ပုံဖော် ရီသွားပါသည်။...:P
ရယ်လိုက်ရတာ မရယ်....အရမ်း ချစ်ဖို့ကောင်းတာပဲ...မ မှတ်တမ်းလေးတွေ ပေါင်းပြီး စာအုပ်ထုတ်တော့နော်...
မဖတ်ရသေးတဲ့ သုံးပုဒ်လုံး ဖတ်သွားပြီ..
ပြဇာတ်တွေ အငြိမ့်တွေမှာ လူရွှင်တော်တွေ ဟာသလုပ်သလိုပဲ နေမှာ။ သီချင်းဖွင့်ပြီး တစ်ယောက်တစ်ပေါက် စိတ်ကြိုက်ကကြတာလေ။ တိုင်ပင်မကိုက် စည်းမကိုက်။ ပျော်တော့ ပျော်စရာပဲ။
ဆီမီးခွက်အက ကို ပြန်ပြုပြင်ပြီး သင်တန်းပြန်ဖွင့်ကြည့်ပေါ့..ဟဲဟဲ..။
စာဖတ်ရတာ Mr.BEAN ကြည့်နေရသလိုပဲ...
အဖော်တွေနဲ့ လုပ်ရတာလဲ ပျော်စရာကြီးပါဗျာ... နောက်တော့လဲ အသားကျသွားမှာပေါ့...
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ချွေးထွက်သွားတယ်ဆိုတော့ အကျိုးရှိတာပဲလေ...
ဇမ်ဘာကထားတယ်ဆိုပြီး အိမ်ရောက်တော့မှ နင်းကန်တွယ်မနေနဲ့ ဦး... လုပ်ထားသမျှ သဲထဲရေသွန်ဖြစ်မှာစိုးလို့ ပါ...
မအယ်ဇီရဲ့ ဆီပုံးမှာ မချိုသင်း ရှိတ်ဆွဲနေတာ တွေ့ ခဲ့ပါတယ်ဗျာ...
ကိုလူထွေး မိန်းမက ဘေးကနေပြီး ရေးခိုင်းတာ...
ချွေးထွက်များမှ သွေးထွက်နည်းမှာတဲ့.. ဒါမှ သွေးခဏခဏ သွားမဖောက်ရတော့မှာတဲ့
တော်ကြာ ခြောက်လီတာဖောက်မယ့် နပ်စ်မနဲ့ တိုးနေဦးမယ်တဲ့...
ဆက်သွားပါ အစ်မရာ။ နောက်တော့လည်း အဆင်ပြေသွားမှာပေါ့။ ကျန်းမာရေးက အရေးကြီးတယ်လေ။ ကျန်းမာရေး ဂရုစိုက်ပါနော်။
only the teachers can dance.
even if you don't get better, who cares.
important thing is you get exercise you need and have fun doing it.
မမရေ... ဆက်သွားဖြစ်အောင်သွားပါနော်.. ကျန်းမာရေးအတွက်လေ..ပျော်စရာလဲ ကောင်းပါတယ်..
အမရဲ့ ပို့စ်အသစ်တွေကို နေ့တိုင်းလာလာချောင်းနေတာ..
အမကျန်းမာပျော်ရွှင်စွာနဲ့ နေ့တိုင်းနေ့တိုင်းစာများများရေးနိုင်ပါစေ။ ။
အပေါ်က ယူကျုလင့်ကိုကြည့်ပြီး နောက်ဆုံးတန်းက အစိမ်းလေးနေရာမှာ မမချိုသင်းကို မြင်ယောင်ကြည့်မိတာ
အော်ရယ်မိပါရော.... အဲလိုလေး ဖြစ်နေတာလား မမ..။
ဘာလို့ များအဲ့လောက်ရေးတတ်ရသလဲ အမရယ်
စောစောကရေးဖို့ ကျန်ခဲ့လို့ပါ ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားကတော့ လုပ်သင့် တယ်အမ ..
သင်တန်းဆက်မသွားချင်တော့ရင်တောင် တနေ့ နာရီဝက်တနာရီလောက် jokking လုပ်ဖို့ အကြံပေးပါရစေ..
အဲလိုဆို ပိုက်ဆံလည်းမကုန်ဘူး လူများတွေကို ရှက်ဖို့လဲ မလိုဘူးလေ ကျန်းမာရေးက အရေးကြီးတယ်အမ ဂရုစိုက်ပါနော်
အပေါ်က လင့်ခ် ကိုစပ်စုပြီး သွားကြည့်တာ... သေချာပါတယ် နောက်ဆုံးက အစိမ်းလေး က မမိုးချိုသင်းပါပဲ...ခွိခွိ။
ဟဟ…ဒီစာသားကို အရီချင်ဆုံးပဲ ။ မျက်လုံးထဲမှာကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းကို မြင်တာနော်။မိုက်တယ်။ ကောင်းတယ် အမရေ သွားသာသွား အားပေးတယ်
ဟီဟီ ရယ်ရတယ် အစ်မ ကနေတဲ့ပုံလေး မြင်ယောင်မိတယ် ထိုင်းမှာလဲ အုပ်စုလိုက် ညနေတိုင်းကကြတယ် ညီမလေးကတော့ ရှေ့ဆုံးက မျောက်လို ခုန်ပေါက်နေတာပဲ ဆရာမတောင် မျက်လုံးပြူးတယ်